जे पनि हुनसक्छ ? - Jhilko
किराती लोक कथामा स्वर्ग जाने एउटा भ¥याङको प्रसङ्ग आउँछ । कथामा किराँतीहरुलाई के लागेछ भने आफू बसेको पृथ्वीतलमा त जति नै गर्दा पनि शान्ति, अमनचयन, सुखसयल अहिलेको भाषामा उठाउँदा भनेजस्तो विकास समृद्धि हुन सकेनछ । स्वर्गमा यी सब काम सफलताका साथ कसरी सम्भव हुन सक्यो ? पृथ्वीतलमा किन भएन ? स्वर्गवासीहरुले साँच्चीकै स्वर्ग कसरी बनाए ? त्यहाँको अनुभव र सिकाइ सिक्ने मन पृथ्वीतलमा बस्ने ती बासिन्दालाई भएछ । स्वर्गको अनुभवबाट सिकेर पृथ्वी तलमा त्यस्तै काम गर्ने उनीहरुले निर्णय गरेछन् । पृथ्वी तलबाट स्वर्ग पुग्ने दूरी नजिक पनि थिएन र तत्कालीन अवस्थामा साधन पनि थिएन ।
स्वर्ग जाने साधन भ¥याङ बनाउने तिनले निर्णय गरेछन् । तर, त्यति लामो दूरीमा पुग्न के को भ¥याङ बनाउने तर्कतरङ्ग चल्यो । धेरै बहस, तर्कतरङ्ग पछि ढिँडोको भ¥याङ बनाएर स्वर्ग जाने मार्गप्रशस्त गर्ने भएछन् । ढिँडो लस्सादार हुने र त्यसले एकअर्कालाई बलियोसँग समाउन सक्ने भएकोले उनीहरुले यस्तो निर्णय गरेका थिए । त्यहीँबाट भ¥याङ बनाउन ज्यामीहरु जुटे । तल ढिँडो मुछेर माथि दिँदै भ¥याङ बनाउँदै जान थाले छन् । माथि बनाउँदै जानेले तल जमिनबाट ढिँडो मगाउँदा रहेछन् । तल हुने ज्यामीले ढिँडो माथि दिँदै गए । धेरै माथि भ¥याङ बनाउँदै पुगेपछि माथि हुनेले एकपटक ढिँडो पठाउन तल माग गरेछन् । तल हुनेले भ¥याङमा रहेको तल्लो भागको ढिँडो झिक्न लगाएको सन्देश बुझेछन् र तिनले पनि त्यसै गर्दा भ¥याङ भत्किन पुगेछ र स्वर्ग जाने भ¥याङको कथा यहीँ अन्त्य हुन्छ ।
यतिबेला नेपालको राष्ट्रिय राजनीति पनि किराँती लोक कथामा आधारित भ¥याङको नियति भोग्न अभिशप्त हुँदै गएको छ । स्थिर सरकार, विकास र समृद्धिको नारा दिएर आएको दुई तिहाइको सरकार कथाकै जस्तो शान्ति, अमनचयन कायम गर्ने नाममा अमूर्तअमूर्त काम गर्न अघि सरिरहेको छ । तर, परिणाम स्वर्ग जाने ‘ढिँडे भ¥याङ’ झैं हरेक पटक चिप्लिरहेको छ । विम्स्टेक, होली वाइन, हिन्द–प्रशान्त मात्र होइन, सिके राउत, विप्लव–प्रकरण वा सानातिना दैनिक कार्यभारहरुमा पनि सरकारको परिणाम उल्लेख्य हुन सकेको छैन । यसले दुई तिहाइको सरकारलाई यसरी खियाइरहेको छ कि यो कुनै पनि बेला जे पनि हुन सक्छ ।
विदेश सम्बन्धमा धाँजा
सरकारले सन्तुलित वैदेशिक सम्बन्धहरुलाई राम्रोसँग परिभाषित गरेर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा संविधानमा व्यवस्था भएको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आफू खुसी व्याख्या र कार्यान्वयन हुन थालेको छ । परम्परागत असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलका आधारहरु बितेका कुरा भइसकेको देखिन्छ । नेपालको भू–राजनैतिक विशिष्टताका आधारमा वैदेशिक नीति नबन्दा छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध चिसिन सुरु गरेको छ । नेपालले लिएको एक चीन नीतिमा पनि धाँजा परिसकेको विश्वास यहीँबाट गर्न सकिन्छ । यसर्थ अमेरिकी विदेश मन्त्री पम्पेओले तिब्बती शरणार्थीको ‛मानव अधिकार’ लाई सम्मान गर्न नेपाललाइ लिखित निर्देशन दिएका छन् । यतिमात्र होइन पम्पेओले संयुक्त राष्ट्र संघको निशस्त्रीकरण अभियानमा नेपालले उत्तर कोरियालाई दवाव दिनुपर्ने अरनखटन गर्नु आफैमा रहस्यपूर्ण छ । यो भन्दा पनि शंकास्पद संकेत त परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको वैदेशिक नीति बमोजिम नै भएको भन्ने वाक्यले दिएको छ । यसैबीच मार्च २६ देखि २९ सम्म हुने चीनको हैनानमा हुने बोआओ सम्मेलनमा नेपाललाई चीनले निम्तोसम्म नगरेको घटनाले प्रस्ट पारिसकेको छ । प्रत्येक पटक नेपालका कार्यकारी प्रमुख वा राज्य प्रमुखले विशिष्ट अतिथिको रुपमा सहभागी हुने प्रचलन नै थियो । नेपालका सभ्रान्त परिवारका सदस्यहरुलाई गैरसकारी सहयोग अनुदानमार्फत पश्चिमा नीतिलाई नेपालमा प्रवेश गराउन सफल भएको पश्चिमा शक्तिहरु कम्युनिष्ट कार्यकर्तालाई भुत्ते बनाउन सफल भएको यो प्रतिफल हो । नेपालका आमूल परिवर्तनका पक्षधर कम्युनिष्ट नेता, कार्यकर्ताहरु फसिसकेको सन्दर्भमा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको आधार नेपाल बन्न झनै सहज भएको छ । क्षेत्रीय सहयोग संस्थाहरु सार्क र विम्स्टेक जस्ता संस्थालाई अगाडि सार्नुको साटो हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा आधारित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले घोषणा गरेको करिव ६० अर्ब रुपैयाको फेरो समातेर नेपाल वैतर्णीको भासमा पुग्न गइरहेको छ ।
राष्ट्रिय विपत्ती, दैवी प्रकोप वा विदेशीको आक्रमण केही नहुँदै सेना परिचालनको वेमौसमी बाजा बजाइएको छ । सेना परिचालन विप्लवको ‘विद्रोह’ लाई आधार बनाइएको छ । मधेसमा पश्चिमाको सी के कार्ड असफल भएपछि त्यसलाई आत्ममर्पण गर्न लगाइयो । सरकारसँग अङ्गालो हाल्न लगाइयो । रेशम चौधरीलाई जन्मकैद गरेर सिङ्गो एउटा समुदायमा असन्तुस्टि बढाइयो । द्वन्द्वका लागि विजारोपण गरियो । देशब्यापी ठूलो कार्वाही नगर्दै, औपचारिक विद्रोहको शंखघोष नहुँदै प्रधानमन्त्रीकै विशेष पहलमा विप्लवमाथि कडा कदम चालियो ।
सेना अमेरिकी प्रभावमा छ भन्ने कुरा विमेस्टेकको अमेरिकी नेतृत्वमा संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतको पुणेमा हुँदा उसले सरकारलाई थाहै नदिई त्यहाँ जाने निर्णयले मात्र पनि पुस्टि गरेको छ । अमेरिकाको सहयोग नेपाली सेनालाई धेरै छ । अमेरिकी प्रतिनिधिको बाक्लै आवतजावत र उठबस सेनासँग छ । यो क्षेत्रमा हिन्द प्रशान्त रणनीति चीनलाई घेर्ने हो । नेपालमा सेनालाई हातमा लिदा नै उसले आफ्नो मक्सद पूरा हुन्छ भन्ने बुझेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीमार्फत सेनालाई परिचालन गर्ने र अन्तिममा सेनाको हातमा शक्ति आइसकेपछि कुनै सहज नेतालाई अगाडि सारेर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने गुरुयोजना हुनसक्छ ।
देशमा द्वन्द्व भड्काउने आधार खोज्ने अनि सेना परिचालनको विधेयक संसद्मा लैजाने काम एकैपटक भएको छ । सेना परिचालन सम्बन्धी विधेयक अहिले जरुरी छैन । पुराना कानुन नै काफी छन् । फेरि प्रदेशमा सेना लैजाने होइन । संघ मातहतमात्र सेना हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एक वर्ष सरकार चलाउँदा प्रशंशा गर्दै वक्तव्य दिने, उत्तर कोरियाको वार्ताको पनि जश दिने, नेपाललाई तिब्बती शरणार्थीको बारेमा यसो गर र उसो गर भनेर निर्देशन दिने, बीआरआईमा नजाओ भन्ने अनि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग विशेष कुरा भएको कुरा औपचारिक जनाउने कार्यलाई सामान्य परिघटना मान्न मिल्दैन । यो क्षेत्र र देशमा आगो सल्काउन अमेरिकाले चाहिरहेको छ भन्ने स्पष्ट यी उदाहरण हुन । यसमा जानेर या नजानेर सरकार फस्दै गएको आभास हुन्छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिको सच्चाइ
नेकपा (विप्लव) माथिको प्रतिवन्ध, सिके राउतसँग सहमति र रेशम चौधरी प्रकरण अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले पारेको प्रभाव विस्तारकै तुरुप होइन भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार देखिन्न । यी प्रकरणहरुले राष्ट्रिय राजनीतिलाइ यति गिजोलिसकेको छ कि सिङ्गै मुलुकको राजनीति तरल भइसकेको छ । तराई–मधेसको परम्परागत राजनैतिक शक्तिहरुमा अविश्वास बढेको छ । यस्तो अविश्वासले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न अहिले नै नसकिए पनि यसले स्थिरता, विकास र समृद्धिमा असहज परिस्थिति निर्माण गर्नसक्छ । राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घटना, राजपा–फोरम र नयाँ शक्तिबीचको एकीकरण वार्ता प्रसंगहरु त्यत्तिकै आएका होइनन् । समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिमा यी घटनाको आयतन यतिबेला त्यति गहन नभए पनि यसले स्थिर सरकारलाई झट्का दिन सक्छ । र, राष्ट्रिय राजनीति ध्रुवीकरण हुनसक्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ । संघीय समाजवादी फोरमले संविधान संशोधनको मुद्धालाई अगाडि सारेर सरकार छाड्ने परिस्थिति आयो भने यसले ल्याउने तरंग निकै महंगो सावित हुनसक्छ । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछिको पहिलो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा आएको संकट त्यति आयतनको थिएन । तर, यहाँ केही राजनैतिक मुद्धाहरु छन् जसको छिनोफानो हुन बाँकी नै छ । यसर्थ त्यो भन्दा पनि आउने संकट गहन हुनसक्छ । यसको निम्ति अखडा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्तिहरुले तयार गरेकै छन् । भू–राजनीतिक अवस्था त छदैंछ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
बेलायती विभेद विरुद्ध गोरखाली सैनिक लडिरहने
18 new members in the NA take oath
Newly elected members to the NA Bhagawati Neupane, Narayan Kaji Shrestha, Bimala...
जसले डोरमणिलाई मुख्यमन्त्री बनायो, त्यसैले हेटौडा राजधानी...
अन्ततः प्रदेश नं ३ को स्थायी राजधानी हेटौंडा र प्रदेशको नाम बागमती प्रदेश सभामा...
Western Countries widely criticized in Nepal
The government of Nepal has immediately expressed dissatisfaction against the concern...
विश्वकै लामो नङ
अयना विलियम्सले आफ्नो लामो नङको कारण विश्वमा नै चर्चामा रहेकी छिन् । उनको नङको लम्बाई...